11 |18 अप्रील 2021
केही मानिसहरूले आफूले येशूलाई बुझ्दैन भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गर्छन्। म अझै तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरूले येशूलाई अलिकता पनि बुझ्दैनौं र उहाँको एक शब्द पनि बुझ्दैनौं। त्योचाहिँ यसैले हो कि तिमीहरूले बाइबलमा उल्लेख गरेको विवरणको कारणले गर्दा र अरूहरूले भनेका कुराको कारणले गर्दा उहाँलाई पछ्याउछौ। तिमीहरूले उहाँलाई कहिल्यै पनि भेटेका छैनौं, उहाँसँग बस्ने कुरा त परै जाओस्, र तैँले उहाँलाई एक क्षणको निम्ति पनि साथ दिएका छैनस्। यस्तो अवस्थामा, येशूबारे तेरो बुझाइ सिद्धान्त बाहेक केही होइन र? के यो यथार्थरहित छैन र? सायद, केही मानिसहरूले येशूको तस्वीर देखेका होलान् वा कोही येशूको घरमा स्वयम् गएका होलान्। सायद केहीले येशूको लुगा छोएका होलान्। तँ स्वयम्‌ले येशूले खानुभएको खाना नै खाएको भए पनि, उहाँबारे तेरो बुझाइ अझ पनि व्यावहारिक छैन, केवल सैद्धान्तिक मात्र छ। कुरा जे भए पनि, तैँले येशूलाई कहिल्यै देखेको छैनस् र शारीरिक रूपमा येशूसँग एक क्षण पनि हिडेका छैनस्, त्यसैले येशूबारे तेरो बुझाइ सदैव यथार्थरहित रित्तो सिद्धान्त हुनेछ। सायद मेरा शब्दहरू तेरो निम्ति त्यत्ति रुचिकर नहोलान्, तर म तँलाई यो आग्रह गर्छुः तैँले आफ्नो मन पर्ने लेखकका धेरै कृतिहरू पढेको हुन सक्छ, तैपनि तैँले उनीसँग समय नबिताइकन के उनलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्छस्? उनको व्यक्तित्व कस्तो छ सो के थाहा पाउछस्? उनी कस्तो जीवन जिउँछन् सो के थाहा पाउछस्? के तँ उनको कुनै संवेगात्मक अवस्थाको बारे जान्दछस्? तैँले प्रशंसा गर्ने मानिसलाई पनि तैँले सम्भवतः पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनस्, त्यसो भए येशूलाई कसरी बुझ्न सक्छस् र? तैँले येशूको बारे बुझेका सबै कुराहरू कल्पनाहरू र धारणाहरूले भरिएका छन्, जसमा कुनै सत्यता वा यथार्थता छैन। यसले दुर्गन्ध निकाल्छ र यो देहले भरिएको छ। यस्तो बुझाइले येशूको फर्काइलाई स्वागत गर्न तँलाई कसरी योग्यको तुल्याउन सक्थ्यो र? देहका परिकल्पनाहरू र धारणाहरूले भरिएकाहरूलाई येशूले ग्रहण गर्नुहुनेछैन। येशूलाई नबुझ्नेहरू कसरी उहाँका विश्‍वासीहरू हुन योग्यको हुन्छन् र?